Aluminum Cnc Machining, fametrahana mazava Machining - Anebon
Tsy hahatakatra ny maha zava-dehibe ny sarotra ny toe-quo, ary tapaka nanosika ny faritry ny zavatra azo atao. Tsy miasa ny tolerances ho mafy toy ny ± 0.01 isaky ny 100MM ny lafiny tolerances na matahotra ianao dia azo atao amin'ny tena miovaova, nanamafy kilasy ny injeniera fitaovana. Fametrahana mazava tsara CNC faritra machined azo naoriny ho mpanjifa fanaon'ny fitaovana manokana.
5 Axe Machining
Fametrahana mazava tsara nitodika Components
CNC nitodika Part
CNC nitodika pijery Parts
Casting maty Mechanical Parts
Die fanariana Phone Parts
Casting maty Process
Best Metal nohitsakitsahiko Parts
Fast nohitsakitsahiko Parts
Metal nohitsakitsahiko Part
Anebon naorina tamin'ny 2010 ny ekipa dia misahana manokana ny amin'ny famolavolana, famokarana ary ny varotra ao amin'ny orinasa fitaovana. Ary efa tafafindra ISO 9001: 2015 fanamarinana.
Manana mandroso, mahomby sy ambony izany fitsipika izany milina avy any Japon, isan-karazany ao anatin'izany ny CNC nitotoana azy, ary nitodika milina, ambonin'ny grinder, anatiny sy tsotra grinder, Wedmls, Wedmhs ect. Ary isika koa dia manana ny fitaovana fitiliana mandroso indrindra. Parts amin'ny tolerances niakatra ho any ± 0.002mm azo tohanana.
Our History Industries Customer Reviews ny Mahatsara
PERCISION, fampisehoana, SY azo itokisana
maty fanariana faritra , aluminium fanariana, aluminium maty mandatsaka faritra , aluminium maty fanariana , nanarato teny amin'ny faritra , aluminium maty niampatra,